Foara iraisam-pirenena : Mpanao asa tanana malagasy 13 hihazo an’i Inde -
AccueilSongandinaFoara iraisam-pirenena : Mpanao asa tanana malagasy 13 hihazo an’i Inde
Foara iraisam-pirenena : Mpanao asa tanana malagasy 13 hihazo an’i Inde
01/02/2018 admintriatra Songandina 0
Ao anatin’ny fifanakalozana sy fiaraha-miasa amin’ny any ivelany. Mpanao asa tanana malagasy 13 mianadahy no hihazo an’i Inde ary hanatrika ny Foara iraisam-pirenan’i Inde, izay hotanterahina ny 2 ka hatramin’ny 18 febroary izao. Sehatra iray ahafahan’izy 13 mianadahy izay notsongaina avy amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy mampahafantatra ny vokatry ny asa tanan’izy ireo eran’izao tontolo izao sy entina hikarohana lalam-barotra amin’ny fampivoarana ny asa tanana sy ny toe-karena malagasy.
Mialohan’ ny handehanan’izy ireo, dia nahazo tso-drano 3 sosona avy amin’ny minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny Vakoka, Jean Jacques Rabenirina sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny Bary Rafatrolaza ary ny Masoivohon’i Inde eto Madagasikara izy 13 mianadahy ireo. « Hitondra ainga vao eo amin’ny asa tanana malagasy ny fandraisan’ireto mpanao asa tanana avy amin’ny faritra samihafa ireto amin’ity foara ity, ary ahafahana mampiroborobo ny fifanakalozana amin’ny sehatra samihafa », araka ny fanamarihan’ny minisitra Jean Jacques Rabenirina.
Andiany faha-32 ity foara andraisan’izy 13 mianadahy ireto anjara izay tohin’ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy Inde. Fotoana ihany koa ahafahan’izy ireo mijery sy misitraka ary miaina ny kolontsaina sy ny asa tanana indiana. « Efa hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena no efa nisy ny fiaraha-miasa tamin’i Inde, ary mbola mitohy izany hatramin’izao. Ho taona ahitam-pahatsarana ho an’ny roa tonta ity taona ity, ary hanamafisana ny fiaraha-miasa », hoy kosa ny masoivohon’i Inde. Ny governemanta Indiana rahateo no miantoka manontolo ny dia sy ny fivahinianan’izy ireo. « Entina hampiroboroboana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta eo amin’ny sehatry ny toe-karena ihany koa ny fandraisana anjara amin’ny hetsika toa izao », hoy indray ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Bary Rafatrolaza.
Politikam-pampandrosoana : RESY LAHATRA NY TIM
Mazava ny politikam-pampandrosoana entin’ny Filoha voafidim-bahoaka Hery Rajaonarimampianina. Voarakitry ny PND ( paika nasionaly ho an’ny fampandrosoana) ary efa novatsian’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Noho ny fisian’ny politika mazava toa izany no nanomezan’ny mpamatsy vola an’iny ...Tohiny
Tsaralalàna : Matin’ny bala efatra i Zahid ZZ Center